Nicholas Kay: Dilalka Muqdisho waxey keenin doonaan in dublamaasiyiintu baxaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ergayga gaarka ah ee Qaramadaq Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa ka digay in haddii ay sii socdaan dilalka iyo qaraxyada Muqdisho ka dhaca laga yaabo in shaqaalaha ajnabiga iyo dublamaasiyiinta shishiyeeye ka baxaan Muqdisho.
Kay, ayaa ka hadlay dilka shalay Muqdisho loogu geystay Xilibaankii labaad muddoo 48 saac gudahooda ah, iyadoo masuuliyada dilka labadaas Xilibaan ay sheegteen Al-shabaab.
“Weerarada lagu dilay Xilibaanada, waxay sababi kartaa in diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ajaanibta ay isaga baxaan Muqdisho” ayuu yiri Kay oo ka hadlayey hadlayay machad ku yaalla dalka Mareykanka.
Kay ayaa sheegay in Qaramada Midoobay sii wedi doonto taageerada ay siineyso dowladda Soomaaliya, hase ahaatee laga yaabo iney qaataan go’aan kaasi ka duwan haddii weerardu sii socdaan.
“Waxaan ka walaacsanahy weerarka ka soo cusboonaaday maalmahan Muqdisho.waxaa naga go’an in aan sii wadno taageeridda aan u hayno dadka Soomaaliyeed iyo wakiiladoodaba maadaama ay ugu howlanyihiin xaqiijinta rabitaankooda iyo kan dadkoodaba, taas oo ku aadan sidii ay ku gaari lahaayeen mustaqbal ay ku dheehantahay xasilooni iyo degenaasho” ayuu sidoo kale yiri Kay.
“Dadka mas’uulka ka ah dilalkan arxan la’aanta ah , ma hayaan wax kale oo ay u siiyaan dadka Soomaaliyeed oo aan ka aheyn in ay sii wadaan qaska iyo ammaan daridda. Waxaan ugu baaqayaa dowladda in ay si dhaqso ah u baarto weeraradan una hor keento maxkamad dembiilayaasha sida ugu dhaqsaha badan” ayuu sidoo kale yiri Ergaygaa gaarka ah ee Qaramada Midoobay Kay.
21-kii bishaan April, Alshabaab ayaa qarax gaari degmada Xamarweyne ku dileen xildhibaan Isxaaq Maxamed Ibraahim, waxaana isla qaraxaas ku dhaawacmay xildhibaan kale oo lagu magacaabo Maxamed Cali Dhuux iyo 2 qof kale oo rayid ah, halka shalay oo aheyd 22-ka April Alshabaab markale degmada Dharkeynley ku dileen xildhibaan kale oo la oranjiray C/caziiz Isxaaq Mursal.